Review Máy Làm Bánh Mì Tự Động WMF KULTX Cao Cấp | Muasalebang - Muasalebang
Review Máy Làm Bánh Mì Tự Động WMF KULTX Cao Cấp | Muasalebang
Đang Đọc: Review Máy Làm Bánh Mì Tự Động WMF KULTX Cao Cấp | Muasalebang in Muasalebang
Ngomshini wesinkwa ozenzakalelayo we-WMF KULT X, ungenza isinkwa sakho kalula. Konke okudingayo yizithako ngokuya ngeresiphi futhi umshini uzokwenza okusele. Umshini unokuzikhethela kwezinhlelo zokubhaka eziyi-12 ukuze uvumelane nazo zonke izidingo. Kuhlanganiswe nomshini kuyinto elula ukusebenzisa ithebula lohlelo elichaza izinombolo zohlelo. Namuhla sizongena ekuhlaziyeni okuningiliziwe kobuhle nobubi bomshini wesinkwa ozenzakalelayo we-wmf kanye nezindlela ezimbalwa zokupheka zesinkwa se-WMF.
1 I. Buyekeza umshini wesinkwa ozenzakalelayo WMF KULTX
1.1 Izinzuzo zomshini wesinkwa we-WMF:
1.2 Ukungalungi komshini wesinkwa se-WMF:
2 II. Iresiphi yesinkwa esenziwe ekhaya somshini we-WMF
2.1 Ukwenza amasemishi athambile nge-WMF Kult X
2.2 Indlela yokwenza isinkwa se-chrysanthemum ngomshini wesinkwa we-WMF Kult X
3 III. Imiyalo yokusebenzisa umshini wesinkwa we-WMF ukwenza isinkwa:
3.1 Umsebenzi wesibali sikhathi:
3.2 Gcina umsebenzi ofudumele:
3.3 Umsebenzi wememori:
4 IV. Imibuzo evame ukubuzwa ngesikhathi sokwenza isinkwa ngomshini wesinkwa we-WMF:
4.1 1. Kungani kuphuma intuthu ku-grill noma ku-vent?
4.2 2. Kungani isinkwa sibhidlika phakathi bese isole libe manzi?
4.3 3. Ingabe umshini ushaya izithako ngokungalingani futhi ubangele ukubhaka okubi?
4.4 4. Ikhekhe/uqweqwe lukhanyayo ngombala?
5 Amathiphu awusizo lapho usebenzisa umshini wesinkwa ozenzakalelayo we-WMF:
I. Buyekeza umshini wesinkwa ozenzakalelayo WMF KULTX
Izinzuzo zomshini wesinkwa we-WMF:
Umshini uhlangene, uklanywe ngokunethezeka, unesikrini esiholelekile nesivalo esinezicabha zengilazi, ngakho-ke kulula ukuqapha inqubo yokubhaka kanye nokulinda umkhiqizo ophelile.
Umshini ozenzakalelayo owenziwe kusuka ku-A – Z udinga nje ukukala iresiphi efanele owaneliseke kakhulu ngayo, linda 2-3h30 kuye ngokuthi imodi, kuzoba namaqebelengwane ashisayo ongawadla.
Umshini ungenza amakhekhe anesisindo esingu-450g no-750g, afanele imindeni emikhulu nemincane.
Kukhona izindlela zokubhaka ezingu-3 ongakhetha kuzo: okuphuzi okukhanyayo, okuphuzi okumaphakathi, nokuphuzi okumnyama, ngakho kulula ukuhlangabezana nezintandokazi zakho.
Isikhunta esinganamathi sihle kakhulu, ngakho-ke kulula kakhulu ukukhipha ikhekhe, vele uphendule isikhunta sibheke phansi bese usinyakazisa ngobumnene, ikhekhe liyaphuma.
Ukuhlanza kulula futhi kuyashesha, ngokuvamile kwenziwa nje kudingeka ukugeza umshini nezinye izindawo ukusula ngezikhathi ezithile.
Ubizwa ngokuthi umshini wesinkwa, kodwa unezindlela eziningi, izindlela eziyi-12 ezihlukene, ngakho-ke emshinini wesinkwa ngaphezu kokwenza isinkwa sasekuseni, ungaphinda uxove inhlama ukwenza amadombolo, usuku lwe-banh, wenze i-pate, wenze irayisi ethosiwe, wenze ujamu… elula kakhulu.
Imodi yesikhathi sokubhaka elula.
Ukungalungi komshini wesinkwa se-WMF:
Isikhunta silinganiselwe, ngakho-ke kufanelekile emndenini omncane wabantu abangu-2-4, uma kunabantu abaningi, kufanele ukhethe imishini enesikhunta esikhulu njengomshini wesinkwa se-Unold.
Uma umndeni wakho umncane futhi ungakhethi ukwenza izindlela zokupheka eziningi ezahlukene, khona-ke i-WMF iyisinqumo esifanele, kodwa udinga ukuthola mayelana nomthengisi ongakusiza ngeresiphi ngemva kokuthenga umshini.
II. Iresiphi yesinkwa esenziwe ekhaya somshini we-WMF
Ukwenza amasemishi athambile nge-WMF Kult X
Lesi yisinkwa sokuqala engasenza nge-WMF Kult X. Iresiphi yesinkwa ihunyushwa kusukela ku-German kuya ku-Vietnamese nge-recipe book. Nansi iresiphi yesinkwa ngokwekhasi le-11 le-recipe book, isidlo sesi-6, igama lesiJalimane isinkwa se-Toast, uhlobo lwesemishi engivame ukulithenga esitolo, bayalisika kakade, uma ngifika ekhaya ngivele ukuyibeka ku-toaster bese uyikhipha bese uyisakaza ngebhotela, i-pâté futhi isetshenziswe ngesoseji noma i-ham nolethisi, ikhukhamba, notamatisi osikiwe kancane. Noma iyiphi indlu engenawo ama-spring rolls, i-pâté, yenza amaqanda athosiwe noma ama-omelets abe isidlo sasekuseni.
400g ufulawa inombolo 13
7 g imvubelo eyomile.
Isinyathelo 1: Qala uthele amanzi afudumele anobisi esitsheni somshini, bese ufaka usawoti namafutha.
Isinyathelo sesi-2: Bese ufaka ufulawa nemvubelo eyomile esikhunjini.
Isinyathelo sesi-3: Xhuma ukuze wenze isinkwa usebenzisa izilungiselelo ezilandelayo: Khetha uhlelo olusheshayo (Uhlelo No. 4) kanye nesitayela se-browning esagolide esijulile.
Qaphela: Encwadini yeresiphi ukupheka ku-brown golden light, ngizame futhi yomile futhi emhlophe ephaphathekile njengokungaphekiwe, ngakho-ke ngiphakamisa ukukhetha imodi yokupheka yegolide emnyama. Kumodi yegolide ekhanyayo, kuzodingeka ubhake enye imizuzu engu-20-40 futhi ubheke ukupha kwekhekhe bese unquma ukuyeka ukubhaka.
Isinyathelo sesi-4: Uma isikhathi sokubhaka sesiphelile, susa isinkwa usivumele sipholile endaweni yokubeka isikhathi esingangehora ngaphambi kokusikwa nokuphaka. Uma ungakudli konke, kufanele ukufake esikhwameni sepulasitiki bese umboza, noma uma unesitsha sepulasitiki sokudla, usifake futhi usimboze ukuze ulondolozeke kangcono.
Ukuphawula kwami ​​​​uma ngilandela iresiphi okungukuthi khetha Inombolo yohlelo 4 bese ukhetha ophuzi okhanyayo (izinga lombala 1), ikhekhe lizoba mhlophe, nambitha inhlama ayiphekwe, ngakho ngibhaka ngesandla imizuzu engu-20.
Khona-ke, ngibona ukuthi uhlangothi oluphezulu lwalungakabi luhle, ngathatha ikhekhe emshinini futhi ngiphendule ikhekhe ukuze phezulu kwekhekhe kube ngezansi futhi ngibhakwe ngesandla eminye imizuzu engu-20. Ngakho-ke ukubhaka mathupha imizuzu engama-40, bese uyikhipha futhi uyiyeke ipholile ihora elingu-1 ngaphambi kokuphakela.
Umkhiqizo owenziwe ukunambitha wome kancane, unesitashi esiningi. Ngakho-ke, lesi sinkwa sifanelekile kulabo abathanda ukudla isitashi esiningi nelayisi. Ngasika ngadla ucezu lwesinkwa ukuze ngizizwe ngisuthi. Lesi sinkwa siminyene kunamasemishi engiwathenga esitolo ukuze ngiwadle. Usayizi mkhulu, ngakho kuwufanele imali ukudla noma iyiphi ucezu. Ngithemba ukuthi uyayijabulela le recipe yesemishi.
Indlela yokwenza isinkwa se-chrysanthemum ngomshini wesinkwa we-WMF Kult X
Izinto ezisetshenziswayo zifaka:
240 g ufulawa 13
10g ibhubesi powder/ubisi powder noma 10ml amanzi orange blossom (ingafakwa noma cha)
30ml ubisi olusha (ungashintshwa ngokhilimu oshayayo)
2 amaqanda enkukhu (cishe 100-120g). Lapha, ngisebenzise amaqanda amancane angu-3, ​​ukwenza ikhekhe elincane ukwenza ikhekhe libe golide ngokulinganayo
40 g ibhotela elingenasawoti. Uma usebenzisa imajarini njengehange, i-TH, .. kufanele yengezwe esikhathini sesibili sokuxova (okungukuthi ngemva kwemizuzu engu-17 uma ukhetha uhlelo lokubhaka 5)
Isinyathelo 1: Chofoza ‘Qala’ ukuze uqale umshini
Isinyathelo sesi-2: Khetha amagremu angu-450
Isinyathelo sesi-3: Khetha ukuphuzi kwekhekhe ukuthi kube okuphakathi noma ukukhanya (kufanele ubeke izinga elilula kakhulu, umbala wekhekhe uzoba muhle kakhulu)
Isinyathelo sesi-5: Khetha uhlelo lwesi-5 ukwenza amakhekhe
Isinyathelo sesi-6: Khetha isikhathi sokubhaka samahora angu-3 nemizuzu emi-5 bese ucindezela u-“Qala” ukuze uvumele umshini wesinkwa we-WMF Kult X uzenzele wena.
Isinyathelo sesi-7: Ngemva kwehora elingu-1 imizuzu engu-45, ungavula isembozo ukuze uhlobise ikhekhe, khetha “Yeka” futhi uhlobise i-alimondi encane namagilebhisi ekhekheni.
Ngikufisela inhlanhla. Ukuphawula kwami ​​​​ukuthi lesi sinkwa se-chrysanthemum kulula ukusidla, sinokunambitha okumnandi kancane, ngakho-ke sidle ngaphandle kokwengeza okunye ukudla okunosawoti. Ngakho-ke, ingadliwa njenge-snack uma ilambile phakathi kokudla okuphekiwe. Ngesikhathi umndeni wami wenza lesi sinkwa, ngangihamba ngibuye ngibuye kanye kanye ngoba umuntu ngamunye emndenini wayehla enyuka eyocwecwa ucezu ukuze aludle. Wonke umuntu uncoma ukuthi kulula ukudla futhi kumnandi.
III. Imiyalo yokusebenzisa umshini wesinkwa we-WMF ukwenza isinkwa:
Vula isembozo bese ususa i-tray yokubhaka ngokuyiphendulela ngokuphambene newashi.
Ukuvimbela inhlama ukuthi inganamatheli esikhaleni phakathi kwe-mixing bar nethreyi lokubhaka, sidinga ukumboza imbobo.
unamathele imajarini engashi.
Beka ibha yokuxuba ethreyini yokubhaka uhlangothi olubanzi lubheke phansi.
Bese ufaka zonke izithako ezidingekayo ethreyini yokubhaka ngokusho kweresiphi. Ngokuvamile, uyapha
Izithako eziwuketshezi ezinjengamanzi noma amafutha okupheka zengezwa kuqala. Bese wengeza ushukela, usawoti kanye nofulawa, ekugcineni
Okutuswayo: Isisindo esiphezulu sikafulawa singama-500g kanti impushan yokubhaka eyomile ingu-7g.
Qaphela: Uma usebenzisa ufulawa omningi, ungase uchitheke futhi ubangele umlilo ethreyini lokubhaka.
Faka ithreyi lokubhaka emshinini bese uliguqula ngokwewashi ukuze likhiye endaweni.
Vala isivalo somshini.
Manje, faka ipulaki yamandla endaweni kagesi.
Sebenzisa inkinobho yohlelo lwe-Prog ukuze ukhethe uhlelo olufanele. Ungabheka imininingwane ngayinye
uhlelo kuthebula elingenhla.
Sebenzisa isikhethi sombala woqweqwe: ukuze ukhethe ukuphuzi okudingekile (okuphuzi kancane, okuphuzi, okuphuzi okumnyama)
Sebenzisa isikhethi sosayizi wekhekhe: ukukhetha usayizi wekhekhe odingekayo (450 g noma 750 g). Lapho ukhetha uhlelo
ngokushesha (inombolo 4), akudingeki ukhethe usayizi wekhekhe.
Ungasetha isibali sikhathi ngokucindezela izinkinobho – kanye + (bheka ikhasi elilandelayo ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nendlela yokusebenzisa
usebenzisa umsebenzi wesikhathi). Lesi sinyathelo singeqiwa uma ukubhaka kudinga ukuqaliswa ngokushesha.
Uma izilungiselelo ezidingekayo sezifakiwe, cindezela inkinobho ethi Qala/Misa ukuze uqale inqubo yokubhaka. Uma kungenzeka, ungavuli
ikhava ngaphambi kokuphela kwenqubo yokubhaka ukuze uqinisekise imiphumela engcono kakhulu yokubhaka.
Phakathi nenqubo yesi-2 yokuxova, uzozwa ukukhala okuphindaphindiwe kuye ngohlelo olukhethiwe
(izinombolo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 kanye ne-11). Manje usungavula isivalo njengoba kudingeka ukuze wengeze izithako ezengeziwe ezifana nempushan yokubhaka noma amantongomane. Vala isivalo ngokushesha ukuze uthole imiphumela emihle kakhulu yokubhaka.
Uzozwa i-beep ephindaphindayo ekupheleni kwenqubo yokubhaka. Ikhekhe lingakhishwa ngokushesha futhi liqede ukubhakwa ngokubamba inkinobho ethi Qala/Yeka noma lishintshele ekusebenzeni okufudumele kuze kube yimizuzu engama-60.
Sebenzisa izindlawu ukukhipha ithreyi lokubhaka bese ulijika kancane liphikisane newashi. Gcoba ngobumnene ithreyi lokubhaka ukuze ikhekhe liwele phezu kwethreyi futhi livumele ukuba liphole.
Uma induku yokuxuba ingakhululeki ngokwayo, induku yokukhipha ehlinzekwa ngomshini ingasetshenziswa ukukhulula i-hook.
Yenza lokhu okulandelayo: Faka induku emgodini wenduku yokuxuba bese uyixhuma ngaphansi kwenduku yokuxuba. Bese ukhipha ngokucophelela ibha yokuxuba.
Faka ikhekhe ethreyini yokubhaka cishe ihora elingu-1 ukuze ikhekhe liphole ngaphambi kokusikwa, ngaphandle uma iresiphi idinga okuhlukile.
Umsebenzi wesibali sikhathi:
Uma ungafuni ukuqala inqubo yokubhaka ngokushesha, ungasebenzisa umsebenzi we-timer. Ungasetha isikhathi sokuphela kokubhaka kanye nesikhathi sokubhaka ngokucindezela izinkinobho – kanye + ukuze wandise noma unciphise isikhathi futhi ukwanda noma ukuncipha ngakunye imizuzu eyi-10. Isikhathi sokulibaziseka eside kakhulu amahora ayi-13.
Lo msebenzi awutholakali ngezinhlelo ezilandelayo: uhlelo lokubhaka olushesha kakhulu, uhlelo lwejamu kanye nohlelo lokubhaka.
Ungasebenzisi ukudla okonakalayo njengamaqanda noma ubisi olungaphekiwe uma usebenzisa umsebenzi wesikhathi.
Gcina umsebenzi ofudumele:
Ngemva kokuphela kwesikhathi sokubhaka, isinkwa sihlala sifudumala ngokuzenzakalelayo cishe ihora elingu-1. Uma ufuna ukukhipha isinkwa, sicela uvale umshini kuqala ngokubamba inkinobho ethi QALA/YIMA.
Uma amandla elahleka ngokuzumayo phakathi nenqubo yokubhaka, umshini uzoqala kabusha ngokuzenzakalelayo ngaphandle kokucindezela inkinobho ethi QALA/YIMA futhi. Esimeni lapho ukunikezwa kwamandla kuthatha isikhathi esingaphezu kwemizuzu eyi-10okukuphoqa ukuthi ucindezele inkinobho yokuqalisa kabusha kusukela ekuqaleni.
IV. Imibuzo evame ukubuzwa ngesikhathi sokwenza isinkwa ngomshini wesinkwa we-WMF:
1. Kungani kuphuma intuthu ku-grill noma ku-vent?
Isizathu: Izithako ziwela kuhhavini noma zibambeke ngaphandle kwethreyi lokubhaka.
Ukwelashwa: Khipha ipulaki yamandla bese uhlanza ingaphandle lethreyi lokubhaka noma indawo kahhavini.
2. Kungani isinkwa sibhidlika phakathi bese isole libe manzi?
Isizathu: Amakhekhe ashiywe amade kakhulu ethreyini yokubhaka ngemva kokubhaka.
Ukwelashwa: Khipha isinkwa ethreyini ngaphambi kokuba umsebenzi wokugcina ufudumele uphele.
3. Ingabe umshini ushaya izithako ngokungalingani futhi ubangele ukubhaka okubi?
Ukukhethwa kohlelo okungalungile: Hlola uhlelo olukhethiwe kanye nezilungiselelo ezinjengosayizi wekhekhe nokunsundu.
Isivalo sivulwa izikhathi eziningi phakathi nenqubo yokubhaka: Isivalo akufanele sivulwe ngaphandle uma kudingekile ukwengeza izithako. Isivalo kufanele sivalwe ngokushesha ngemva kokuvula.
4. Ikhekhe/uqweqwe lukhanyayo ngombala?
Isizathu: Khetha umbala woqweqwe olungalungile.
Ukwelashwa: Njengoba umenzi wesinkwa engenawo umthombo wokushisa eduze kwesivalo, umbala woqweqwe olumnyama kakhulu uyadingeka uma ufuna umgogodla okhrispy.
Amathiphu awusizo lapho usebenzisa umshini wesinkwa ozenzakalelayo we-WMF:
Ngenhlama enzima: Kufanele ushintshe ukuhleleka: faka izithako ezomile ethreyini yokubhaka kuqala, bese ufaka izithako eziwuketshezi. Uma ufuna ukusebenzisa umsebenzi we-timer, qiniseka ukuthi i-baking powder ayihlangani noketshezi ngaphambi kwesikhathi.
Izingxube zokubhaka: Uhlelo #1 ngokuvamile lulungele izingxube zokubhaka, ngaphandle uma kucaciswe ngenye indlela ku-iresiphi. Ungafaki amanzi amaningi engxube yokubhaka kunalokho okuchazwe ku-recipe. Kuye ngeresiphi, kungase kudingeke ukunciphisa inani lamanzi ku-50 ml.
Ubuphuzi bekhekhe: Njengoba umshini wesinkwa ungenawo umthombo wokushisa eduze kwesivalo, izinga eliphezulu eliphuzi liyadingeka uma ufuna i-crispier core.
Iqanda: Uma usebenzisa amaqanda engeziwe, uzodinga ukulungisa inani loketshezi ngendlela efanele. Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi ushaye amaqanda ngaphambi kokungeza ingxube.
Ngomshini wesinkwa we-WMF, ungenza isinkwa sakho esishisayo ekhaya futhi ulawule okokufaka kwezithako. Ikakhulukazi, asikho isidingo sokukhathazeka ngoba awunaso isikhathi sokuxova inhlama, ulolonge ikhekhe bese upheka isobho… I-WMF ingumshini wesinkwa othandekayo, ohlangene futhi odonsa amehlo.
Xem Thêm So sánh 2 máy ép chậm Bosch MESM500W và MESM731M | Muasalebang
Hướng dẫn cách mở tài khoản MB Bank theo số điện thoại đơn giản | Muasalebang
Cách làm thịt lợn (thịt heo) xào giá đỗ đơn giản, giòn ngon hấp dẫn | Muasalebang